I-10 Free Beat Ukwenza ama-Softwares Okufanele Uzame (2020) - Ama-Softwares
10 Mahhala Beat Ukwenza Softwares Okufanele Uzame
Kwakunezinsuku lapho kwakudingeka ubhukhe isitudiyo sokuqopha bese unikezwa umkhawulo wesikhathi sokuqopha konke.Isoftware yokwenza iBeat seyivele, yonke into isishintshe indlela esenza ngayo umculo.Ukukhiqizwa komculo wanamuhla kufinyeleleka kuwo wonke umuntu. Ngakho-ke, uma unolwazi mayelana nokwenziwa kwesigqi ungalanda kalula isoftware bese uzama izandla zakho kuyo. Noma ngubani angafunda izisekelo bese enza ingoma kungakapheli imizuzu embalwa.
Kulesi sihloko, sizozama konke okusemandleni ukuklelisa ezinye zezisoftware ezenza isoftware ezikhona namuhla.
I-Best Free Beat Ukwenza i-Softwares:
1. Avid Pro Amathuluzi Kuqala
Amathuluzi e-Avid Pro Okokuqala kwaziwa njengenguqulo yamahhala. Kungu-lite edition yamathuluzi we-Pro.Ama-Pro Tools aziwa njengemboni ejwayelekile ye-DAW. Ngakho-ke, uma uqala ngohlobo lwamahhala luzokunikeza isingeniso esihle sendlela esebenza ngayo ncamashi. Uma uthanda ukuthi isebenza kanjani, ungathuthukisa kamuva.Yize kunemikhawulo ethile kuma-Avid Pro Tools, uzokwazi ukuqopha amathrekhi alalelwayo ayi-16, amathrekhi wezinsimbi angama-16, uphinde uqophe amathrekhi ama-4 ngasikhathi sinye.
Le software yamahhala iza neXpand! 2, okuyi-plugin ewusizo enemisindo eminingi eyakhelwe ngaphakathi.Isici sokuqandisa ithrekhi sisiza amakhompyutha akho ekusebenziseni kwe-CPU futhi sivimbele ukuphahlazeka.Umtapo wezincwadi uza nomsindo osezingeni eliphakeme ongawusebenzisa ngamabhithi akho.
I-LMMS kungenye indlela lapho ufuna isoftware yokwenza mahhala.Uma usebenzisa iWindows, Mac, noma iLinux, le DAW isebenza nabo bobathathu.Ngale software, uzokwazi ukwakha izingoma zakho ngokusebenzisa i-sequencer bese ukhetha i-BPM nesiginesha yesikhathi oyifunayo.
Isoftware ivumela ukudlala inothi usebenzisa ikhibhodi ye-midi noma ungavele usebenzise ikhibhodi kukhompyutha yakho noma kwi-laptop.Ngalokhu, unekhono lokwenza amabhithi futhi uhlanganise amathrekhi ezinsimbi, akusiza ukuqoqa izigubhu namabhasi ube yisigqi esisodwa.
Isihleli sePiano Roll ngaphakathi kwale software sikusiza ukuthi ubone izingoma zakho.Ku-LMMS, uzokwazi nokungenisa amafayela we-MIDI.
IMuseScore enye isoftware kuhlu lwethu lwesoftware yokwenza mahhala. Ihluke kancane njengoba igxila kakhulu ekuhlelweni kwenothi. Ngalokho, ungasebenzisa amasu we-classical kanye nolwazi ekwakhiweni kwesigqi sakho.Ngale software emangalisayo, uzokwazi ukulawula isikhala kanye nosayizi wazo zonke izinto zomculo.Konke okuvela ku-Staves, clefs, kanye ne-accidentals konke kungadlalwa ngale software ukuthola imiphumela emangalisayo.
Uma ungenalo ulwazi oluningi lwethiyori yomculo lapho-ke iMuseScore ingaba ithuluzi elihle lokufunda futhi. Kulula ukuyisebenzisa.Isici esimangazayo nesisebenziseka kahle sale software ukuthi ungachaza kabusha zonke izinqamuleli zekhibhodi ngokuya ngokuthanda kwakho.Inokukhethwa kwe-Midi Input, ukungenisa, nokuthekelisa okungakusiza wenze isigqi esigcwele ngaphakathi kwesoftware bese uyigcina ukuze uyiqede kamuva noma uyihambise khona lapho.
Uma unolwazi oluningi ngeSibelius, iMuseScore izokuzwela.Iningi labakhiqizi linemikhuba ethile engaguquki yokusebenza. Ngakho-ke, ukusebenzisa le software kungaba wusizo olukhulu kuwe njengoba ungayisebenzisa njengokukhetha kwakho.
4. Ukulandelelwa 7
I-Tracktion ilungele ukwenziwa kwesigqi.Ayinayo imikhawulo. Uzokwazi ukudala inani elingenamkhawulo lamathrekhi ukwenza amabhithi akho afanele ngokungeza ama-audios noma amasampuli.Iyahambisana nama-plugins amaningi. Ukuphela kokufanele ukwenze, vele ubangeze kufolda ye-VST bese ungakusebenzisa kumathrekhi akho ngaphakathi kwesoftware. Iyaziwa njengenguqulo yamahhala ye-Waveform Pro, ngakho-ke uma usuvele usebenzise i-Waveform, kuzoba lula kuwe. Ngokushesha ungathuthukela enguqulweni ekhokhelwayo bese ungathola ukufinyelela kuzici eziningi eziwusizo kakhulu.
Isigubhu esincane kulula ukuzulazula futhi sikunikeze ngokuboniswa okucacile okubonakalayo kwesigqi sakho.I-Tracktion inesici esiyingqayizivele esibizwa nge-plugin sandboxing. Lapho wenza lesi sici sisebenze, sizovikela iseshini yakho ngokusiza ukuvimbela ukusetshenziswa kwe-CPU ekusetshenzisweni ngokweqile, futhi kunokuba kushaye isoftware, izovala ngokushesha i-plugin iphinde ivimbele umsebenzi wakho ekulahlekelweni.
5. I-FL Studio
Uhlobo lwamahhala lwesitudiyo se-FL lunokulinganiselwa okumbalwa, kepha usazokwazi ukulisebenzisa ukwenza nokuthumela amabhithi ngaphandle kokulinganiselwa.Kukuvumela ukuthi ulondoloze iphrojekthi yakho, kepha ngeke ukwazi ukuvula amaphrojekthi ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke, unesikhathi esisodwa kuphela sokusebenzela ukushaya kwakho.
Uhlobo lwamahhala lweFl Studio lukuvumela ukuthi uthumele izingoma zakho kumafayela we-WAV noma we-MP3. Ikuvumela ukuthi ufinyelele kuzo zonke izici ze-DAW ezibandakanya ama-compressors, ama-sampler, ama-chorus namanye ama-plugins.I-studio yeFL ilula ukuyisebenzisa futhi ikuvumela ukuthi uhlole inqubo yokwenza amabhithi ngaphandle kokudideka ngazo zonke izinketho.
6. Ibhande legaraji
IGarageBand empeleni iyisoftware yokwenza ethandwa kakhulu eyenziwe yi-Apple. Le software itholakala kuphela kumadivayisi we-Apple. Ngakho-ke, uzokwazi ukuyisebenzisa kuphela uma ungumnikazi we-Mac, i-iPhone, noma i-iPad.Ungangeza nokuzwakala okungokoqobo, ukushaywa kwesigubhu okurekhodwe kuqala kuthrekhi yakho nge-plugin yeDrumer. Kuzoboniswa ikhithi eligcwele lesigubhu esikrinini ngaphakathi kwale software.
IGarageBand iyithuluzi elimangalisayo ongalisebenzisa ku-iPhone yakho ngoba ikuvumela ukuthi wenze umculo kunoma yisiphi isimo. Uzokwazi nokuqopha umsindo ngemakrofoni eyakhelwe ngaphakathi yefoni.
Ngaphakathi kwale software, kukhona ukungezwa kweBass Amp Designer.Umtapo wezincwadi ongaphakathi kweGarageBand ubanzi ngesoftware yokwenza mahhala.Nge-iRig, ungaxhuma ngqo ngqo efonini yakho ngekhebula le-jack bese uqopha ku-GarageBand kunoma iyiphi insimbi kagesi.
7. IStudio One 4 Prime
IStudio One 4 Prime ikuvumela ukuthi usebenzise izici eziningi ezimangazayo ngaphandle kokuthi usebenzise imali eyodwa. Inesici sokuhudula nokudonsa esilula ukudala amabhithi akho kalula.Ngale software, uzokwazi ukufinyelela kuma-plug-in ama-Native Effects, ongawasebenzisa ukucubungula imisindo yamabhithi akho.
Futhi, into enhle kakhulu ukuthi ayikho imikhawulo ngaphakathi kwale software uma kukhulunywa ngokukhipha amabhithi akho.
Ama-plugins - Ithuluzi Elihle Kakhulu Lokwenza Beat
Lapho ukhetha isoftware yamahhala yokwenza isoftware, kungcono uhlole ukuthi ikuvumela yini ukuthi ungenise amanye ama-plugins. Ngalokho, uvula umnyango wezinketho ezingapheli zokucubungula.Lapho benza amabhithi, bonke abakhiqizi banenhloso okungukukhiqiza okuthile okuhluke kakhulu. Ama-plugins akunikeza into efanayo oyifisayo. Kuthatha ukwenziwa kwesigqi sakho ezingeni elilandelayo.
Ngakho-ke, le ndatshana yesoftware yamahhala yokwenza umculo itholakale namuhla ibhalelwe ukukusiza nina bantu enenketho evumelana nesitayela sakho sokukhiqiza. Yonke isoftware esiyibhale ngenhla imahhala, ngakho-ke, asikho isizathuukukhathazeka ngakho. Ungaya ukulanda isethi ephelele njengamanje bese udlala ngokuzungezile ukuthola ukuthi iyiphi ekusebenzela kangcono kakhulu.